एमालेको नगर कमिटीको अध्यक्षमा दिलिप न्यौपाने — donnews.com
एमालेको नगर कमिटीको अध्यक्षमा दिलिप न्यौपाने
आकांक्षीहरुको क्षमता र पृष्ठभूमिलाई ख्याल राख्दै नेतृत्व चयन, भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका लागे पाखा
पोखरा । नेकपा एमालेको पोखरा महानगर कमिटीको अध्यक्षमा दिलिप न्यौपाने चयन भएका छन् । एमाले पार्टीको पोखरामा सम्पन्न भएको अधिवेशनबाट अध्यक्षमा न्यौपाने सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका हुन् ।
नगर कमिटीका अध्यक्षहरुको महानगरपालिकाको मेयरमा सिधै दावा गर्न सक्ने भएको हुँदा यसमा धेरै नेताहरुले दावी गरेका थिए । यसपटक सार्वजनिक विद्यालयको रकम हिनामिना गरेर अख्तियारमा मुद्दा खेपिरहेकादेखि महानगरपालिकाका प्रवक्तासम्मले अध्यक्षका आकांक्षी बनेका थिए ।
पार्टीले अध्यक्षका आकांक्षीहरुको क्षमता र पृष्ठभूमिलाई ख्याल राख्दै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएकाहरुलाई पाखा लगाएको हो । पार्टीले कमिटीका पूर्वसचिव न्यौपानेलाई अध्यक्ष चयनसँगै अन्य दावेदार धनबहादुर नेपाली, तेजनारायण अधिकारी र हरि त्रिपाठी पाखा लागेका छन् । अध्यक्षमा चयन भएका न्यौपाने भने नेता खगराज अधिकारी निकटका पात्र हुन् ।
त्यसैगरी उपाध्यक्षमा मोहन गुरुङ, सचिवमा जीवनप्रसाद आचार्य, उपसचिवमा रामचन्द्र थापा र हरिमाया गुरुङ रहेका छन् । त्यसैगरी महिला खसआर्य तिर अम्बिका थापा, तारा शर्मा ढकाल, सुशिला आचार्य, भावना सुवेदी, मीना भट्टराई, निर्मला अधिकारी पौडेल, लक्ष्मीदेवी तिमिल्सिना, सीताकुमारी भुसाल रहेका छन् ।
महिला जनजातिमा चन्द्रा जिसी, सेतीमाया गुरुङ, पवित्रादेवी गुरुङ, रञ्जुकुमारी गुरुङ, शान्ति गुरुङ र शान्ति शेरचन रहेका छन् । त्यसैगरी महिला दलिततर्फ मन्दिरा परियार, रमा नेपाली, विष्णु विक, सीता परियार र हरिमाया विक रहेका छन् । महिला अल्पसंख्यकमा लज्जावती दुरा रहेका छन् । महिला अपाङ्गमा अञ्जना केसी छिन् भने महिला श्रमिकमा सम्झना थापा क्षेत्री रहेकी छिन् ।
त्यसैगरी महिला खुल्लातर्फमा अञ्जु केसी, किरण गौतम, गुमादेवी गौतम, चन्द्रा शर्मा तिवारी, टिकादेवी अधिकारी, बसन्धरा पौडेल, भोजकुमारी थापा, लक्ष्मी कार्की बस्नेत, लोककुमारी क्षेत्री, सिता पहारी र हुमाकुमारी क्षेत्री रहेका छन् ।
त्यसैगरी दलित खुलातर्फ चन्द्रकिशोर गौतम, भीमबहादुर नेपाली, मेखबहादुर विक र रोहित नेपाली रहेका छन् । जनजाति खुल्लातर्फ कमल श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर कुमाल, मानबहादुर मगर र सफल लामा रहेका छन् ।
अपाङ्गको खुल्लातर्फ बुद्धिबहादुर बागदास र अल्पसंख्यकमा खुल्लातर्फ आशिक ईलाही रहेका छन् । त्यसैगरी मजदुर श्रमिकतर्फ खुल्लामा दानबहादुर शाही रहेका छन् ।
खस आर्यतर्फ खुल्लामा अग्निधर त्रिपाठी, कमलमणि त्रिपाठी, कृष्णप्रसाद गौतम, चेतन कार्की, नारायणप्रसाद त्रिपाठी र पुष्पराज तिमिल्सिना रहेका छन् ।
खुल्ला सदस्यहरु तर्फ अर्जुन केसी, कपिल थापा, कृष्णप्रसाद लम्साल, डिल्लीराम सुवेदी, दलबहादुर कुँवर, दीपकबहादुर गोदार, नरेन्द्रनाथ ढुंगाना, प्यामलाल बराल, महेन्द्र गोदार, रुद्रनाथ बराल, लोकबहादुर कार्की, विष्णुमणि बराल र शेखर गौतम रहेका छन् ।
त्यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रको तर्फबाट सदस्य बनेकाहरुमा ईश्वरीप्रसाद बास्तोला, सरिता सुवेदी, शशिधर पराजुली, इन्द्रकुमारी अधिकारी, बसन्त भण्डारी, विष्णुबहादुर भट्टराई, पुरुषोत्तम रेग्मी, ईश्वरप्रसाद सुवेदी, प्रकाश शर्मा, लिलाधर अधिकारी, नारायणप्रसाद बास्तोला, वीरबहादुर थापा, कृष्णकुमारी गुरुङ, ढोलबहादुर गुरुङ, तोरणबहादुर बानिया, जगन्नाथ तिमिल्सिना, चिरञ्जीवी पोखरेल, दिलबहादुर जिसी, नविन भण्डारी, मोहनबहादुर केसी, कृष्णबहादुर थापामगर, खेमराज बराल र चेतबहादुर क्षेत्री, मनोहरि त्रिपाठी, बेदनाथ पौडेल, मनोहरि ढुंगाना, गणेशराज धमला, दिनेशबाबु खड्का, प्रमोदकुमार पौडेल, प्रेमराज बसौला, विष्णुकुमारी तिवारी र चन्द्रप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरु लागे पाखा
श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा एमालेका नेता तेजनारायण अधिकारीले लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
सरकारी विद्यालयको लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेका तेजनारायण अधिकारीलाई यसपटक पार्टीले नै पाखा लगाई दिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा एमालेका नेता तेजनारायणले लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
आफ्नै वडाको एकमात्र सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा नेता तेजनारायणले आफ्नो कार्यकालको सम्पूर्ण हिसाब–किताब नै सार्वजनिक गर्न सकेनन् । तत्कालिन विद्यालयका प्रधानाध्यापक केदारनाथ अधिकारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजनारायण मिलेर विद्यालयको ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम हिनामिना गरेका थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दवावमा अख्तियारमा रहेको मुद्दा मिलाउन खोजेका अधिकारी सरकार परिवर्तनसँगै कारवाहीको दायरा नजिक पुगिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियारले सो मुद्दा छिट्टै नै विशेष अदालतमा पेश गर्दैछ ।
पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीको आर्शिवाद पाएर भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा लाग्दै पनि ‘पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिमा अध्यक्ष’को जिम्मेवारी पाएका तेजनारायणलाई यतिबेला न त पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छ, न त गण्डकी प्रदेशका प्रभावशाली नेता खगराज अधिकारी नै यिनको समर्थनमा छन् ।
धुमिल र भ्रष्ट छवि भएकै कारण पार्टी संगठनबाट पनि यतिबेला तेजनारायण एक्लिदैं गईरहेका छन् । त्यसो त स्थानीय निर्वाचनमा वडा नं. ७ को वडाध्यक्षमा चुनाव उठ्न खोज्दा एमाले कैं स्थानीय कार्यकर्ताहरुले व्यापक विरोध गरे पछि अधिकारी पछि हटेका थिए । नगर कमिटीमा आफूले कहीँ पनि स्थान नपाए पनि सदस्यका रुपमा श्रीमती टीकादेवी अधिकारीलाई भने प्रवेश गराएका छन् । कुनै समय स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारीका विरुद्धमा हस्ताक्षर संकलन गर्दै हिडेका अधिकारीको पछिल्लो समय नेता खगराज अधिकारीसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।